Nin xiran dharka haweenka & dad kale oo loogu shakiyey hawlo argagixiso oo lagu qabtay Garowe. – Radio Daljir
Nin xiran dharka haweenka & dad kale oo loogu shakiyey hawlo argagixiso oo lagu qabtay Garowe.
Diseembar 28, 2009 12:00 b 0
Garowe, Dec 28 – Ciidamada ammaanka ee magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland oo in muddo ahba waday hawlgallo ay ku xoojinayaan amniga magaalada caasimadda ah ee Garoowe, ayaa dhawrkii habeen ee ugu danbeeyey qabqatay dad lala xiriirinayo in ay ku lug-leeyihiin falal amni darro.
Hawlagalladaan ayaa kii danbeeyey oo ay ciidanku xalay sameeyeen, waxay ku soo qabteen nin dhallinyaro oo la sheegay xilliga la qabtay in uu faraha kula jiray falal danbiyeed, waxaana ninkaasi bileysku ay gacanta ku dhigeen isagoo xiran dharka haweenka.
Saraakiisha ciidanka amniga ee magaalada Garoowe oo saxaafadda la hadlay kana warbixiyey hawlgalladii todobaadkaan ay wadeen gaar ahaan midkii ugu danbeeyey ee lagu qabtay ninka xiran dharka haweenka, ayaa sheegay muddadii ay hawlgallada adkaynta nabadgalayada ah wadeen in ay soo qabqabteen dad badan oo lala xiriirinayo in ay ku lug-leeyihiin dhacdooyinkii amni darro ee ka dhacay magaalada Garoowe.
Saraakiishu waxay si wadajir ah u sheegeen, ninka ay xalay qabteen ee xirnaa dharka dumarka in uu ahaa ragga dhaqanka iyo caadada ka dhigta furashada dadka xilliga habeenkii ah, sidoo kalana waxay tilmaameen in lagu tuhusan yahay falal kale oo dil iyo dhaawacidba iskugu jira oo ka dhacay magaalada Garoowe.
Ninkaan oo lagu magacaabo Axmed Xuseen Ibraahim, ayaa bileysku waxay soo bandhigeen dhammaan qalabkii uu dadka ku baaran jiray oo isku jira mindiyo iyo jaffooyin, waxaana sidoo kala ay bileysku ay saxaafadda tuseen 11 teeleefoon oo ah kuwa gacanta lagu qaado, kuwaasi oo la sheegay in uu ka furtay dadka shacabka ah ee ku dhaqan gudaha magaalada Garoowe.
Ninkaan ayaa xilligii la qabatay ku labbisnaa dharka dumar sida canbuur, xijaab iyo indha-shareerka wajiga haweenku ku qarsadaan, waxaana arrinkaasi uu lama filaan ku noqday dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Gaaroowe.
Ma ahan markii ugu horraysay oo deegaannada Puntland lagu qabto nin sidaan oo kale ugu labbistay dharka haweenka, waxaana bartamihii sannadkaan magaalada Galkacyo lagu qabtay nin kale oo xiran dharka dumar kaasi oo ciidanku ay gacanta ku dhigeen isagoo u shaqaynaya xaafad iskana dhigayey haweenay jaariyad ah.
?Kalfadhigii golaha wakiilada Puntland oo maanta la soo gabagabeeyey.